इन्डोनेसियन आमाकी छोरीले नेपाली बुवालाई... :: प्रभाकर गौतम :: Setopati
इन्डोनेसियन आमाकी छोरीले नेपाली बुवालाई दिएको 'सर्प्राइज'
प्रभाकर गौतम काठमाडाैं, माघ २६
गाडी गुड्छ नेपाली, उकाली र ओराली
घुम्दै फिर्दै जादै छौं, पाखा पर्वत देउराली...
इन्डोनेसियन आमा र नेपाली बुवाकी छोरी आइशा डोटेलले यो आफ्नो बुवालाई दिएको 'सर्प्राइज' गीत हो। तर यही गीतलाई नेपालका चर्चित गायकले 'सराहनीय प्रयास' भन्दै सेयर गरेपछि आइशासँग यो गीतमा संलग्न सबै 'सर्प्राइज्ड' भएका छन्।
'आज मलाई एउटा गीत तपाईंहरूलाई सुनाउन मन लाग्यो। नेपाली पाराको यो संगीत अलि पश्चिमा शैलीमा गाइएको छ। १५ वर्षे गायिकालाई नेपाली पटक्कै आउँदैन, तर पनि नेपाली गीत गाउने प्रयास सराहनीय छ। उनले आफ्ना नेपाली बुवालाई उपहारस्वरुप यो गीत गाएकी रे!'
'गाडी गुड्छ नेपाली' सुन्ने जोकोहीलाई आइशाको नेपाली शब्द उच्चारण बिझाउन सक्छ। तर त्यही अस्पष्टता यो गीतको विशेषता हो। गीतमा प्रयोग भएको सांरगीले पुराना र आइशाको अंग्रेजी लवजले प्रवासी नेपाली नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेको छ।
बायाँबाट- सारंगीमा प्रगति देवकोटाका बुवा, गीतकार प्रगति, गायिका आइशा डोटेल र प्रशान्त देवकोटा।
नेपाल छँदा प्रगति फुर्सदमा गीत-कविता लेख्थिन्। छोरीलाई संगीत सिकाउन थालेकी आइशालाई उनले आफूले लेखेको नेपाली गीत अभ्यास गराउन थालिन्।
'नेपाली भाषा सिकेर बुवालाई सर्प्राइज दिने भन्दै आइशाले निकै मिहिनेत गरेर नेपाल उच्चारण सिकिन्,' प्रगतिले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भनिन्।
प्रगतिको नेपाली पारा र आइशाको अंग्रेजी शैलीले सुरूमा अलमल भए पनि अन्ततः गीतले आफ्नो लय समात्यो। गीतमा प्रगतिले आफन्तजन र देश छोड्दाको भोगाइ उतारेकी छिन्। यो भोगाइलाई उनीहरूले लयमा ढाल्ने क्रममा प्रगतिका भाइ प्रशान्त देवकोटा पनि जोडिए। उनीहरूको परिवारका तीन फरक पुस्ता जोडिएको यो गीत सुरूमा 'फ्यामिली प्रोजेक्ट'का रूपमा सीमित थियो।
जब गीतको संयोजन र मिक्सिङ सकियो, गीतले विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीको भावना बोकेको महशुस भएको प्रगति बताउँछिन्। कुनै यात्रामा हिँडेझैं लाग्ने यो गीतको संगीत संयोजन बलियो पक्ष हो। संयोजनको काम अनिश श्रेष्ठले गरेका छन्।
'यो गीत आइशाको बुवाले आफ्ना साथीहरूलाई नदेखाएको भए म्युजिक भिडिओ नबन्न पनि सक्थ्यो,' प्रगति सुनाउँछिन्।
केही साताअघि आइशाका बुबा विभोद डोटेलले साथीहरूको प्रतिक्रिया लिन गोर्खाज हार्ली ग्रुप च्याटमा यो गीत राखे। त्यो गीत सुन्ने धेरैमध्ये एक थिए, दीपेश श्रेष्ठ। कुनै समय हिट्स एफएमका चर्चित रेडियो प्रस्तोता दीपेश अस्ट्रेलियामा फिल्म निर्देशनको पढाइ सकाएर यही क्षेत्रमा सक्रिय छन्।
आइशाको मिहिनेतसँगै गीतको शब्द र संगीतले पनि बेस्सरी तानेपछि आफूले निःशुल्क निर्देशन गर्ने निर्णय गरे।
'स्वरमा छोरीको माया, शब्दमा परदेशीको भावना। नेपाली र विदेशी शैलीको संगीत मिसिएको यो एउटै गीतमा धेरै कुरा रिलेट गरेँ,' अनलाइन कुराकानीकै क्रममा भिडिओ निर्देशक दीपेशले भने।
उनका अनुसार नेपाल छाडेर विदेश बस्ने नेपालीका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई नेपाली सिकाउनु चुनौती हो। अस्ट्रेलियामा केटाकेटीले नेपाली बोलेको सुन्दा रमाइलो मान्ने दीपेश आइशाको प्रयासबाट उत्साहित हुने नै भए।
दस कक्षा पढ्ने आइशा गायनसँगै गितार, पियानो बजाउँछिन् र राम्रो चित्र पनि कोर्छिन् रे। गीतको भिडिओमा देखिने चित्र आइशाले बनाएका हुन्, जसले गीतको शब्दअनुसार उच्चशिक्षाका लागि विदेश जान लागेकी पात्रको मनोदशा बोल्छ।
ती पात्र गीतकार प्रगति आफैं हुन्। प्रगतिको कथामा स्रोता-दर्शकले आफ्नो कथा पनि भेट्न सक्छन्।
आफूले छुटाएको कुराले मानिसलाई जीवनभर पछ्याउँछ। विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि देश त्यस्तै 'छुटेको कुरा' हो। छुटेको कुरा झनै प्रिय हुन्छ।
'विदेश बस्ने नेपालीको भावनालाई मेरा आमाबुवा र छोराछोरी सबैले बुझ्नेखालको गीत बनाउने सोच राखेर शब्द लेखेँ,' प्रगतिले गीत लेख्नुको उद्देश्य खुलाइन्।
पुरानो र नयाँ पुस्ता जोड्ने गीतकारको सोच उतार्ने प्रयासस्वरुप भिडिओमा तीन पुस्ताको अनुहार देखिन्छ। गीतमा आइशा, प्रगति, प्रशान्तसँगै प्रगतिका बुवा सारंगी रेटिरहेका देखिन्छन्। सारंगीको र्‍याइँर्‍याइँमा अंग्रेजी लवज र नेपाली भावना मिसिँदा 'गाडी गुड्छ नेपाली' सरल तर अर्थपूर्ण गीत बनेको छ।
सफर यो त बित्नेछ, ठाउँ साथी छुट्नेछ,
गाउँ अर्को जानुछ,
समेट्न केही सक्ने छैन, खाली याद लानुछ,
तर जिन्दगीको सफरमा जहाँ पनि पुगौंला,
यहीँ घाम अनि जून हेर्दै याद खोली डुबौंला
प्रगति भन्छिन्, 'गीतमा भनिएको घाम र जून हाम्रो झन्डाको चन्द्र-सूर्य हो, जसलाई हेर्दा नेपालकै घाम र जून याद आउँछ।'
गीतको मध्यतिर पुग्दा एक्कासि हर्न बज्छ र पात्रको मन झस्किन्छ। त्यो हर्न देश छोड्ने संकेत थियो। आज पनि प्रगतिलाई एकान्तमा त्यो हर्नको आवाजले झस्काउने नछोडेको बताउँछिन्। यस्तै भावना लेख्ने उनलाई यो गीत तयार भएर सार्वजनिक भएपछि मन हलुको महशुस भइरहेको बताँउँछिन्।
अझ रमाइलो, उनकी आठ वर्षीय छोरी र अढाइ वर्षे छोरा जतिबेलै यही गीत गुनगुनाइरहन्छन् रे!
उनको फेसबुक टाइमलाइनमा छोराको भिडिओ राखिएको छ, जहाँ उनले गाउँदैछन्– गाडी गुड्छ नेपाली, उकाली र ओराली...
प्रकाशित मिति: आईतबार, माघ २६, २०७६, ०६:४२:००